शिक्षा/स्वास्थ्य – Page 20 – Nepal Parikrama
मानसिक समस्यामा बैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किने युवा युवती
काठमाडौं, चैत । बैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका अधिकांश युवा युवतीहरुमा मानसिक समस्या देखिएको छ । यो समस्या बढी हुनेमा खाडी मुलुकबाट फर्किने युवा युवती बढी पाइएका छन् । आफुनो नीजि तथा पारिवारिक आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने सपना साँचेर विदेश पुगेका युवायुवतीहरु नेपाल एयरपोर्टबाट सोझै लगनखेलस्थित मानसिक अस्पताल पुग्न थालेपछि यस्तो समस्या बाहिर आएको हो । अस्पताल श्रोतका अनुसार खाडी मुलुकबाट फर्किए
यस बर्षको एसएलसी शुरू
काठमाडौं–चैत १८ । यसवर्षको प्रवेशिका अर्थात एसएलसी परीक्षामा आज सुरु भएको छ । परीक्षाको पहिलो दिन विद्यार्थीहरूले आज अंग्रेजी विषयको परीक्षा दिए । यस बर्षको एस एलसीमा ६ लाख १५ हजार ५ सय ५४ परीक्षार्थी सहभागी भएको परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीका अनुसार नियमिततर्फ ४ लाख ५२ हजार ८ सय ८१ र एक्ज्याम्टेडतर्फ १ लाख ५९ हजार ४ सय १७ विद्यार्थी सहभागी हुने छन् ।
एसएलसीमा ६ लाख १५ हजार ५ सय ५३ सहाभागी हुने
कठमाडौं–चैत १४ । आगामी चैत १८ गतेदखि सुरु हुने यस वर्षको प्रवेशिका परीक्षामा ६ लाख १५ हजार ५ सय ५३ परीक्षार्थी सहभागी हुने भएका छन् । यसबर्षदेखि एस एलसीमा ग्रेडिङ स्टिम लागु गरिपछि परिक्षा दिने कुनैपनि विद्यार्थी अनउत्तिर्ण हुने छैन । यस वर्षको परीक्षामा नियमिततर्फ चार लाख ५२ हजार ८ सय ८१ र पुन: परीक्षातर्फ एक लाख ५९ हजार ४ सय १७ विद्यार्थी सहभागी हुनेछन् । त्यसै, प्राविधिकतर्फ तीन हजार २ सय ५५ पर
चैत १३ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएका २ जना डाक्टर पक्राउ परेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा रौतहट मतसरी ५ बस्ने ३१ वर्षीय राजिवकुमार झा र बारा बहुअरी ४ बस्ने २९ वर्षीय पृथ्वीनारायण यादव रहेका छन् । प्रमाणपत्र पेश गरेर एमबिबिएस अध्ययन गरी चिकित्सा पेशा अपनाउन मेडिकल काउन्सिलमा चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा दिन आएका झा र यादवलाई केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले शनिबार परीक्
विश्व क्षयरोग दिवस मनाइयो
चैत ११ । विश्व क्षयरोग दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको छ । ‘टीबी रोक्न एकजुट हौं’ भन्ने नारासहित आज आज मार्च २४ देशभर विभिन्न संघ संस्थाले जनचेतनामूलक र्‍याली तथा कार्यक्रमहरू यो दिवस मनाएका हुन् । क्षयरोग ‘माईको–ब्याक्टेरियम–ट्युबरक्लोसिस्’ नामक ब्याक्टेरियाका कारण लाग्ने रोग हो । क्षयरोगका कारण विश्वमा हरेक वर्ष १५ लाखको मृत्यु हुने गरेको छ भने ९० लाख नयाँ क्षयरोगी देखापर
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा ९ पदमा ७ सय ७९ जनाका लागि खुल्ला
चैत,५ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ९ पदमा ५ सय ७९ जना स्वास्थ्यकर्मी को लागि आवेदन माग गरेको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराबाट करार सेवामा राख्ने गर्ने गरी नर्स, अनमी, हेल्थ एसिस्टेन्ट, अहेब, ल्याब असिस्टेन्ट, रेडियोग्राफर लगायतका पदमा आवेदन खुला गरिएको हो । अनमी २ सय ४० जनाका लागि आवेदन खुलेको छ भने १ सय ८० जना हेल्थ असिस्टेन्ट र १ सय ४० जना अहेब माग गरिएको छ । विज्ञापन अनुसार सबै परीक
अटिजम र अभिभावको बुझाई
शंकर चैसिर । ओहो, बाबु बोल्दैन ? सूर्य विनायक लानु न , त्यहाँ लगेपछि त नबोल्ने बच्चा बोल्छ रे, मेरो छोरा नबोल्दा धेरैले मलाई यो सुझाव दिएका थिए । आमाको मन, मैले पनि मेरो छोरालाई सूर्य विनायक लगाएतका विभिन्न मन्दिरमा दर्शन गर्न लगे । तर पनि अहिले पाँच वर्षको उमेरमा पनि मेरो छोराले दोहोरो कुरा गर्न जानेको छैन । शुरुमा त मैले मेरो छोराको नबोल्ने मात्र समस्या होला भनेकी थिए । तर कहाँ हुनु, अरु बच्चा
ब्रेथलाइजर नहुँदा सर्वसाधारणलाई हैरानी
काठमाडौं–चैत २ । हिजोआज ट्राफिक प्रहरी पनि अस्पतालका श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी रोग जाँच गर्ने डाक्टर जस्तै बनेका छन् । यदि तपार्इँ बाटोमा सवारी साधन चलाएर साँझपछि यात्रा गर्नुहुन्छ भने मापसे चेकिङमा पर्नु भएकै होला । अनि तपार्इँले त्यो पनि याद गरेको हुनपर्छ, ट्राफिक प्रहरीले मापसे चेकिङ कसरी गर्छन् । हो ट्राफिक प्रहरीले मापसे चेकिङ गर्दा पान, पराग खाएको आफ्ना मुख नजिकै ल्याएर हस्पिटलको डाक्टरले भने ज
विगत २२ वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा अनवरत रूपले लागि रहनुभएको छ, दिवस शाक्य । २०३१ साल असार १० गते सुनसरी जिल्लामा जन्मनुभएका शाक्यले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा धरानको श्री शिक्षा सदन माविबाट पूरा गर्नुभएको थियो । एसएलसी परिक्षा उत्तीर्ण भएपछि थप शिक्षाका लागि काठमाडौ उपत्यका छिर्नु भएका शाक्यले इन्टर मिडियट शिक्षा भक्तपुरको नवदुर्गा बहुमुखी क्याम्पसबाट गर्नुभयो । उहाँले स्नातक र स्नातकोत्तर फाइनान्सि
विद्यायलमा शैक्षिक व्यथिति कहिलेसम्म ?
नेपालमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि सबैभन्दा बढी विस्तार भएको शैक्षिक चेतना हो । एउटा पुस्ता जसले आफूले राम्रोस“ग पढ्न पाएन तर आफ्नो छोरा छोरीलाई खाई नखाई भएनी पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता आत्मसाथ गरे । त्यसकारण पनि पछिल्लो समय शिक्षित जनशक्ति बढ्दै गएको छ । आफ्ना सन्तानले शिक्षा आर्जन गर्न गरून, उनीहरूले आफ्ना मातापिता या पुर्खाले झैँ लेखपढ गर्न नजानेकै कारणले जीवनमा ठगिनु भन्ने मान्यता पनि विक
सगरमाथा मल्टिपलमा रक्त्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
पृथ्वी घुम्दै जादा एउटै सूर्यको दुई रूप ।
जयपुर लिटेचर फेस्टिबलका केही दृश्यहरू ।
जब खोला नै बरफ बनेर बग्न छाड्छ, आहा कति रमाइलो म्याग्दीको पर्यटीकय घोरेपानी ।
काठमाडौंको आकासबाट काठमाडौं र आसपासलाई नियाल्दा..
नेपाल परिक्रमा डट कमका लागि, – सल्हाकार : चिरञ्जीवी गौतम – सम्पादक : वी.आर शर्मा –सह–सम्पादक : चित्र बहादुर लम्तरी मगर –समाचार संयोजक – एस एच घिमिरे – उपसम्पादक : बलराम तिमिल्सिना, – लेखक/स्तम्भकार : सुवासचन्द्र भण्डारी, – पोखरा ब्यूरो प्रमुख : बैकुण्ठप्रसाद पौडेल, – संम्बाददाता : दिप्ती भट्ट – मार्केटिङ : युवराज तिमिल्सिना
मोवाइल नम्बर :९८४९९०४२३१
Mobile Number : 9849904231